Waa maxay waxa ay markaan muhiimadda ugu weyn siinayso Kooxda Manchester City? – Gool FM
(Manchester) 02 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay markaan muhiimadda ugu weyn siinayso sidii ay heshiis cusub uga saxiixan lahayd mid ka mid ah xiddigaheeda da’da yar.
Sida warbixinta lagu sheegay qandaraas kordhinta cusub ee Phil Foden ayaa mudnaanta koowaad u ah kooxda haysata horyaalka Premier League ee Manchester City.
Man City ayaa haatan xooggeeda isugu geynaysa sidii ay da’yarkeeda Phil Foden heshiis cusub uga saxiixan lahayd, kaddib markii dhowr ciyaaryahan oo safkeeda koowaad ah ay qandaraasyo cusub qalinka ku duugeen.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay sanadka 2024-ka, laakiin sida ay warinayso Jariiradda Manchester Evening News dalab heshiis kordhin hormarineed ayaa la siin doonaa 21-sano jirkaan tayada leh, kaasoo ay kooxdu doonayso inay ku sii haysato garoonka Etihad sanado badan.
Kooxda Barcelona oo dalab heshiis kordhin ah hordhigaysa Ousmane Dembele